Disadisa politika : tsy hita be ihany ny tena vahaolana azo antoka | NewsMada
Disadisa politika : tsy hita be ihany ny tena vahaolana azo antoka
Ahoana ihany ny amin’ny disadisa politika misy amin’izao fotoana izao? Tsy hita be ihany ny tena vahaolana azo antoka. Famakafakana…
Misy sa tsia ny disadisa politika eto amin’izao fotoana izao? Tsy mahita sy tsy mahazo ravin’avaratra ny mpanohitra. Na amin’izay lazaina ho ara-dalàna eny anivon’ny Antenimierampirenena io, na ny fanehoan-kevitra amin’ny haino aman-jerim-panjakana, na famoriam-bahoaka ankalamanjana, na ny fanaovana hetsika an-dalambe…
Amin’izany, potehin’ny mpitondra avy hatrany amin’ny fampiasana herim-pamoretana izay mitady hihetsika rehetra; eny, na tsy antony politika aza. Ampangaina ho manakorontana sy manonganam-panjakana tsinona. Vokany, mihalalina sy maharitra ny disadisa politika, fifampiandrasana kendry tohina… Tsy misy izay hoe fitoniana.
Vokany, tsy mety ho marin-toerana tanteraka ny fitondrana na toy inona filaza. Toy ny tany tsy misy fanjakana eto, raha tsy hiteny afa-tsy ny tsy fandriampahalemana isan’andro vaky saika manerana an’i Madagasikara, ohatra. Eo koa ny fanjakazakan’ny manampahefana sy ny vahiny sasany isan-tsehatra sy isan’ambaratonga any ifotony…
Vahaolana tsy mampiombona
Iandrasana ny fifidianana amin’ny taona 2018 ve ny raharaha? Maro ny manahy ny hisian’ny krizy mafy sy sarotra no ho ny teo aloha: ahina ny hosoka sy hala-bato noho ny tsy fahatokisana mpitondra sy izay mety ho mpiray tsikombakomba aminy amin’izany. Nefa tsy hanaiky izany ny vahoaka, matoa tsy mihetsika sy tsy miteny amin’izao…
Mety hisy ihany ve izay lazaina ho fihaonambe na fiaraha-midinika hahatongavana amina fifanarahana alohan’ny fifidianana? Na ho fanorenana ifotony io, na fampihavanam-pirenena… Mbola samy manana izay tetehiny sy mahamaika azy ny vondrona sy ny mpanao politika sasany: fiatrehana fifidianana, fihaonambe, fampihavanana… ?
Kitsapatsapa hatrany ny raharaha, fifanenjanana sy fifanenjehana, fifampiandrasana kendry tohina… Arakaraka izay mety ho fifandanjan-kery izay. Tsy misy izay finiavana hifanatona sy hifampidinika, na ekena izao aza ny fisian’ny disadisa politika ary ahina ny mety hisian’ny krizy ho mafy sy sarotra lavitra no ho ny teo aloha.
Fotoana fisaintsainana izao lazaina fa fiatoana politika amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao? Mangingina sy tsy mihetsika ny rehetra…